Xayeysiinta Dhaladka ah: Hab cusub oo lagu hormariyo alaabtaada | Martech Zone
Haddii aad suuqgeynaysay alaabadaada muddo dheer oo aad wax yar ku haysay natiijooyinka togan, markaa waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad tixgelisay xayeysiis hooyo sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinkaaga. Xayeysiiska asaliga ah ayaa kaa caawin doona, gaar ahaan markay tahay kor u qaadida xayeysiimahaaga warbaahinta bulshada ee jira iyo sidoo kale ku kaxeynta isticmaaleyaasha aadka loo bartilmaameedsaday waxyaabahaaga. Laakiin marka hore, bal aan dhex galno waxa xayeysiiska wadaniga ah intaanan ka fikirin sida.
Qeexitaanka ugu isticmaalka badan ee xayeysiiska wadaniga ah waa midka ay Machadka Suuq-geynta Macluumaadka, kaas oo ku sifeynaya xayeysiinta wadaniga ah:
Nooc kasta oo xayeysiin lacag ah oo bixiya macluumaad si weyn loo bartilmaameedsaday, xiiso leh, waxtarna u leh dhagaystayaashaada taas oo ah mid lagu kala sooci karo waxyaabo aan xayeysiis ahayn ama kuwa u dhashay.
Waxay ugu xayeysiineysaa qaab aysan dhagaystayaashaadu isla markaaba u turjumin waxyaabaha ay ka kooban yihiin xayeysiis laakiin ay u arkaan inay yihiin waxyaabo caadi ah. Intaa waxaa sii dheer, waxa ku jira horayba labadaba faa'iido ayey u leeyihiin oo xiiso u leh dhagaystayaashaada sidaa darteed uma ekaan doonaan wax faragelin ah ama meel iska dhigaya.
Xayeysiiska asaliga ah wuxuu ku yimaadaa qaabab iyo cabirro badan oo kala duwan. Waxaad ku sameyn kartaa Google qaab ah natiijooyinka raadinta lacag bixinta. Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa warbaahinta bulshada qaab ah isboorti ama dhiirrigelin qoraallo ah oo ku saabsan Facebook, cusbooneysiinno la kafaala qaaday oo ku saabsan LinkedIn, iyo liisaska dallacsiinta ee Twitter. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa qormooyin boggaga awoodda sare leh sida The New York Times, The Huffington Post, BuzzFeed, iyo Forbes. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa makiinadaha talo bixinta si aad u sameyso xayeysiiskaaga hooyo. Kuwani waa liisaska maqaallada lagula taliyay ee ka socda internetka oo dhan oo ka muuqda xagga hoose ee maqaallada aad ka akhriso bogagga internetka qaarkood.
Marka sidee ayaad ula midoobi kartaa xayeysiiska u dhashay ololahaaga suuqgeynta?
Yeelo Hadaf Cad
Xayeysiinta asaliga ah waxay leeyihiin faa iidooyin fara badan nooc kastoo ay ahaadaanba. Waxay kaa caawin karaan inaad dhisto wacyigelin iyo kalsooni ku saabsan astaantaada iyo sidoo kale inay kaa caawiyaan inaad hesho macaamiil badan oo ku saabsan waxyaabaha aad ka kooban tahay. Faa'iidada ugu weyn ee laga helo ayaa ah inaadan had iyo jeer u baahnayn inaad sii waddo waxyaabaha cusub. Waad ku soo jiidan kartaa dhagaystayaasha cusub adoo adeegsanaya qoraalo aad hore u daabacday hore. Waxaa jira faa iidooyin kale oo aad kuheleyso xayeysiinta udhaxeysa, sida cadeynta bulshada iyo SEO wax ku oolka ah ee astaantaada. Xayeysiisyada asaliga ah waxay uruuriyaan cadeynta bulshada qaab jecleysi iyo faallooyin, si ka duwan xayeysiisyada calanka u gaarka ah Markaad ku dhiirrigeliso qoraalladaada barxadda warbaahinta bulshada, waxaad u bandhigi doontaa farriintaada dhagaystayaal aad u tiro badan, taas oo macnaheedu yahay inaad hesho taraafik badan oo loogu talagalay bartaada ama boggaaga. Xayeysiinta asaliga ah ayaa si gaar ah waxtar u leh marka aad bilaabeysid oo aadan wali helin SEO-gaaga nidaamsan.
Nooca cadeynta bulshada ah ee aad kaheleyso xayeysiiska asalka ah, fariintaadu waxay umuuqataa mid lagu kalsoonaan karo sidaa darteedna waxay u egtahay inay ku faafayaan. Markay dad badani ka warqabaan astaantaada, waxay u turjumi kartaa hay'ad sare oo astaantaada ah calaamado bulsheed iyo xiriiriyeyaal, kuwaas oo gacan ka geysan kara in boggaagu ka sarreeyo.
Iyada oo la adeegsanayo xayeysiinta waddanka, waxaad sidoo kale si ballaaran ugu kobcin kartaa dhagaystayaashaada warbaahinta bulshada. Qoraaladaada kafaalaqaadka ah ee Facebook iyo Twitter waxay keeni karaan kuwa raacsan iyo kuwa jecel, inkasta oo ay tahay oo keliya haddii waxyaabaha ku jira ay la wadaagaan daawadayaasha.
Tayada intaan la gaarin tirada
Si aad uga faa iideysato xayeysiintaada xun, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto waxyaabo qiime u siinaya akhristayaashaada, oo xiiso leh, sidoo kalena soo jiidata dareenka. Erin Schneider, oo ah tifaftiraha adeegga qorista qormada ee internetka, ayaa yidhi,
Wax kasta oo aad sameyso, ha abuurin waxyaabo u muuqda in aad sheygaaga qotomineyso. Dadku ma jecla in si furan loo iibiyo.
Si aad u bilawdo, hubi inaad ku daabacdo waxyaabaha ku jira xayeysiiska asaliga ah boggaaga. Sidoo kale waa inaad hubisaa in tayada waxa ku jira ay sareyso, oo ay kujirto wicitaan ficil ah, iyo in sifiican loogu bartilmaameedsaday dhagaystayaasha saxda ah oo aan u arkin inay qas ku yihiin.
Ka Faaideysi Wanaagsan Bartilmaameedka
Had iyo jeer u tag isticmaaleyaasha horeyba u ahaa macaamiishaada ama aad ugu eg macaamiishaada. Sidoo kale waa inaad u isticmaashaa dib-u-habeyn si aad uga faa'iideysato, oo aad ugu tagto dadka horay u soo booqday boggaaga kahor si ay u eegaan wax ka mid ah alaabadaada ama adeegyadaada.
Xayeysiiska Dhaladka ah ayaa ka shaqeeya Warbaahinta Bulshada, Too
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii, xayeysiinta wadaniga ah waxaa ka mid ah in ka badan oo kaliya qoraalo lagu baahiyay baraha bulshada. Waxaad sidoo kale ku qori kartaa maqaallo kafaala qaaday boggaga warbaahinta sare sida Forbes iyo Buzz Feed. Qoraalladani waxay soo jiidan doonaan dareenkaaga astaanta waxayna xitaa beddeli karaan fikradaha xun ee jira ee ku saabsan astaantaada.
Waxay kuxirantahay sida miisaaniyadaadu u adagtahay, waxaad sidoo kale kaheli doontaa adeegyada talo bixinta waxyaabaha faa iidada leh. Waxay si baaxad leh u kordhin karaan tirada aragtiyaha aad ka heleyso waxyaabahaaga adoo ku dhejinaya barta daabacaad weyn.
Si kastaba ha noqotee waxaad fiirisaa, xayeysiinta udhaxeysa ayaa faa'iido badan leh, iyada oo inta badan suuqleydu hadda si firfircoon u adeegsadaan. Waa hab fiican oo lagu soo jiito dhagaystayaasha cusub oo sumaddaada halkaas looga saaro.
Tags: xayeysiis hooyokor u qaadida wax soo saarkawaa maxay xayeysiinta wadaniga ah
Samantha R. Gilbert waxay muddo 2 sano ah wariye ahaan uga shaqeyneysay wakaalad wax ku daabacda internetka oo ku taal magaalada New York ee dalka Mareykanka. Iyadu sidoo kale waa khabiir ku takhasustay qorista mowduucyada sida baloog garaynta, farshaxanka casriga ah, iyo waxbarashada.